အမုန်းမီးများငြိမ်းစေချင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အမုန်းမီးများငြိမ်းစေချင်
Posted by padonmar on Oct 26, 2012 in Creative Writing | 75 comments
ဤဝတ္ထု၌ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည် အမြုံမ ဖြစ်နေသဖြင့် လင်ယောက်ျားအတွက် မယားငယ်တစ်ယောက် ရှာပေးခဲ့ပုံ၊ မယားငယ် ကိုယ်ဝန်တည်သည့်အခါ ဝန်တိုစိတ်ဖြင့် အစာအာဟာရနှင့် ရောလျက် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဆေး ကျွေးခဲ့ပုံ၊ သုံးယောက်မြောက်ကိုယ်ဝန်
ပျက်ကျသောအခါ၌ မယားငယ်ဖြစ်သူက အကြောင်းစုံ သိရှိသွားပြီး ”နောက်ဘဝတွင် ဘီလူးမဖြစ်ကာ သင့်သားသမီးများကို သတ်စားနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ရပါစေသား” ဟု ဆုတောင်းလျက် ထိုကိုယ်ဝန်ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ပုံ၊ နောက်ဘဝတွင် ထိုအိမ်၌ပင်
မယားကြီးဖြစ်သူက ကြက်မကြီး ဖြစ်ပြီး မယားငယ်ဖြစ်သူက ကြောင်မကြီးဖြစ်ကာ ကြက်မကြီး ဥတိုင်း ဥတိုင်း လာရောက် စားသောက်ခဲ့ပုံ၊ ဤသို့အားဖြင့် ဘဝဆက်တိုင်း ဘတစ်ပြန် ကျားတစ်ပြန် ရန်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြရာ ဘုရားရှင်လက်ထက် ရောက်သောအခါ တစ်ယောက်က
ဘီလူးမဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ယောက်က လူအမျိုးသမီး ဖြစ်ခဲ့ပုံ၊ ထိုအမျိုးသမီး ကလေးမွေးတိုင်း မွေးတိုင်း ဘီလူးမက လာရောက် စားသောက်ခဲ့ပုံ၊ ဘုရားရှင်က ရန်ကို ရန်ချင်း မတုံ့နှင်းရန် တရားဟောသဖြင့် ဘီလူးမ သောတာပန်တည်သွားပုံ စသော အကြောင်းအရာများ
ဒီပုံလေးကိုလူတိုင်းကြားဖူးပါတယ်။အမုန်း အာဃာတတွေနဲ့ အပြန်အလှန်လက်စားချေမှု တွေကြောင့် ဘ၀တိုင်း ဘ၀တိုင်း ကိုယ်ကသူ့ကို သတ်လိုက် သူကကိုယ့်ကို သတ်လိုက် သံသရာလည်ခဲ့ကြပုံလေးပါ။
အမုန်းတရားဟာပူလောင်လှပါတယ်။အသိဉာဏ်ရှိသူက တစ်နေရာမှာ ရပ်ပေးလိုက်မှ ဒီသံသရာကလွတ်ပါမယ်။
လူတစ်ယောက်ချင်း မုန်းတီးမှုကြောင့်လက်စားချေတာထက် လူမျိုးလိုက် ဘာသာလိုက် လက်စားချေမှုဆိုတာ ပိုပြီးတောင် မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စတွေပါ။
ဒါငါ့မြေလို့စွဲနေကြရင် ကိုယ်ကိုတိုင်ရဲ့ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ဘယ်နှစ်ဆက် ဒီမြေပေါ်မှာနေခဲ့လဲဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြစေလိုပါတယ်။
ကိုယ့်နောက်က မျိုးဆက် ဘယ်နှစ်ဆက် သူများမြေပေါ်မှာ သွားရောက် အခြေချနေကြပြီလဲလို့လည်း ဆန်းစစ်ကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ လူသားဆိုတာ ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ရှာဖွေကြရင်း တစ်နေရာကတစ်နေရာ ရွေ့လျားသွားတတ်ကြတတ်ကြလို့
ဒါကတော့ ငါ့မြေပဲလို့ တစ်ထစ်ချစွဲမထားစေချင်ပါဘူး။
အခုခေတ်ကြီးမှာ နိုင်ငံခြားဆိုတာ လူတိုင်းနဲ့ ပတ်သက်နေတာဖြစ်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲက အနည်းဆုံးတစ်ယောက်တော့ အခြားမြေပေါ်မှာ အလုပ်သွားလုပ်တာမျိုးရှိကြမှာပါ။
သူတို့အပေါ် အဲဒီမြေပေါ်နေသူတွေက မုန်းတီးရန်ရှာမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုခံစားကြရပါမလဲ။
ဒါငါ့ဘာသာအတွက်လို့ လက်စားချေချင်ရင်လည်း ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာက လက်စားချေဖို့ သင်သလား၊မေတ္တာထားဖို့သင်သလား သေချာပြန်စိစစ်ကြည့်ကြစေလိုပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်ဘာသာမှ `တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး မုန်းတီးပါ။ကိုယ့်ဘာသာကို ကာကွယ်ဖို့ သူတစ်ပါးကိုသတ်ပါ ´လို့ မသင်ကြားပါဘူး။
ကိုယ့်ဘာသာကို ကာကွယ်ချင်ရင် ကိုယ်ကိုတိုင်က ကိုယ့်ဘုရားရဲ့ အဆုံးအမကို တသွေမတိမ်းလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်။
ဘာသာရေးအတွက်လူကိုသတ်တယ်ဆိုတာ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ပါ။
မုန်းတီးရမှာက အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်နဲစွန့်ပစ်ရမှာက အမုန်းတရား ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိက ကတော့ ကိုယ်ချင်းစာတရားလေးထားကြစေချင်တာပါပဲ။
ဒီမီးကို သယ်ဆောင်ဖြန့်ဝေတာ ကိုယ်မဖြစ်ပါစေနဲ့။
ဟင် တစ်ယောက်ထဲ ပျင်းစရာကြီး
ဧရာဝတီကိုအောင်ဇော့် အာဘော်လေး ကူးတင်ပါတယ်..
ဧရာဝတီ| October 27, 2012 | Hits: 2,277
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခတွင် “နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်လှုပ်ရှားနေသော လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများလည်း ရှိနေကြောင်း သိရှိရသဖြင့် ၎င်းတို့ကိုဖော်ထုတ်၍ ဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားမည်” ဟု သမ္မတရုံးမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းသည် မေလမှ စတင်ပေါ်ပေါက် ကြီးထွားလာနေသော လူမျိုးရေးနှင့် ဘာသာရေး အမုန်းမီးတောက်များ ပိုမိုပြန့်နှံ့လာစေရေး သွေးထိုးနေသော စစ်သွေးကြွများနှင့် ရာဇဝတ်သားများက တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို မထေမဲ့မြင်ပြုပြီး ထင်ရာဆိုင်းခွင့် ရနေခဲ့ကြောင်း အတိအလင်း ဝန်ခံခြင်းပင်။
ဒီပြဿနာက အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းလို့ မပြီးနိုင်ဘူး။ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ဝိုင်းပြီးဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ လုပ်ရလိမ့် မယ်လို့ ယူဆတယ်။ အဓိက ကတော့ မီဒီယာတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍပဲ၊ မီဒီယာကလည်း ဒီပြဿနာကိုငြိမ်းချမ်း တဲ့နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် ဝိုင်းပြီးကြိုးစားပေးဖို့ လိုမယ်လို့ ထင်တယ်။
ကျွန်တော် စိုးရိမ်တာက အကြမ်းဖက်တံဆိပ်အကပ်ခံရမှာကိုပါ။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်က ကျွန်တော် တို့လူမျိုးတွေက အကြမ်းဖက်ဝါဒီတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မျိုးကို အရောက်မခံနိုင်ဘူး၊ ဒီပြဿနာက နောက်ထပ် လည်း အများကြီး မျှော်လင့်ထားရပါလိမ့်မယ်။ ပုံသဏ္ဌာန် ပေါင်းစုံနဲ့ တက်လာမှာပါ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် နောက်ထပ်ပြဿနာတွေ အများကြီးရှင်းရမယ်လို့ မျှော် လင့်ထားတယ်။ ဘယ်ထောင့်ဘယ်နေရာကနေ ဘယ် ပုံစံနဲ့ ထွက်လာမလဲဆိုတာပဲ ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ ကျွန် တော်တို့ဘက်ကမူတွေတော့ ရှိရပါမယ်။ အဲဒါက ဘာ လဲဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းရေးပဲ၊ သမိုင်းနဲ့ ချီပြီး ရှင်းရမယ့်ပြဿနာ ရှိတယ်။ ခိုလှုံနေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ ကိစ္စရှိတယ်။ ပြည်ပက မတရားခိုးဝင်နေတာရှိတယ်။ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း မဖြစ်ခြင်းကို ပြန်ပြီးစိစစ်ရမှာ ရှိတယ်။ နိုင်ငံသားတကယ်စစ်တယ်ဆိုရင် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ကိုပေးရမှာက အစ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ပြင်ဆင်ထား ရပါလိမ့်မယ်၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရံဖန်ရံခါမှာ တစ်လျှောက် လုံးနစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့သူက ဒေါသအလျှောက်တုံ့ပြန်တဲ့အခါ မှာ အကြမ်းဖက်အဖြစ်တံဆိပ်အကပ်ခံရမယ်ဆိုရင် ပြီး ခဲ့သမျှအတွက် နစ်နာပါတယ်။ နောက်အနာဂတ်မှာလည်း ဒီထက်ပိုပြီးကြီးတဲ့ ပြဿနာတွေရင်ဆိုင်သွားစရာအ ကြောင်းရှိတယ်။ နောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရမဲ့ အလားတူ ပြဿနာတွေအများကြီး ကျွန်တော်ဆီမှာ ထပ်ရှိလာနိုင် တယ်လို့ ကြိုပြီး သဘောပေါက်ထားရပါလိမ့်မယ်။ ငြိမ်း ချမ်းတဲ့နည်း အခြေခံနဲ့ပဲ ဖြေရှင်းရမှာပါ။ နောက်ပြီး တော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းတွေက အမြဲတစ်စေ နောက်ကျခဲ့တဲ့အတွက် အချို့နေရာတွေမှာ မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ရတာတွေ ရှိတယ်ဗျ။ အဲဒါတွေ သက်ဆိုင်တဲ့ သူအကုန်လုံးက ကိုယ့်တာဝန်တွေကို ပို ပြီးတော့ လှုံ့ဆော်တဲ့ အရေးအသားတွေကို သတိထား ပြီးတော့ ရှောင်ကျဉ်စေချင်တယ်။ ဒါတွေအားလုံးဟာ အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းလို့ ဘယ်တော့မှ မပြေလည်ဘူး၊ အဖြေမထွက်တဲ့ အပြင် သက်ဆိုင်သူအားလုံး အနှုတ် လက္ခဏာကိုပဲ ခံစားရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းကြဖို့ ကိစ္စရယ် တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ရန်စွပေးတဲ့ အရေးအသားမျိုးကို ရှောင်ရှားဖို့လိုပါတယ်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးက အမှန်တကယ်ရှိနေတာထက် ပိုပြီးလိုနေတယ် ဆိုတာ မီးမောင်းထိုးပေးပါ။ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ ထိန်း သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်မှုက အားနည်းနေတာကို တွေ့ရပါ တယ်။ အားလုံးရဲ့ကိစ္စ အားလုံးရဲ့ ကိုယ့်အိမ်တွင်းရေးလို သဘောထားပြီး ဝိုင်းဝန်းရမယ့် ကိစ္စပါ။
အမကြီး padonmar ရေ “ဒါကတော့ ငါ့မြေပဲလို့ တစ်ထစ်ချစွဲမထားစေချင်ပါဘူး” လို့တော့ မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်။ အောက်က လင့်လေး မှာဆရာအောင်သင်းပြောပြတာ နဲ့ အတိတ်သမိုင်းကြောင်း တစ်ချို့ ကို ပြန်ကြည့်စေချင်တယ်
တစ်ချိန်က mujahideen တွေ ရက်စက်မှုနဲ့ဘယ်လောက်ခက်ခက်ခဲခဲ တိုက်ထုတ်ခဲ့ရသလည်းဆိုတာ သိရင် အမကြီးက မေတ္တာ ဂရုဏာ ရှေ့ထားချင်ပါတယ်ဆိုရင်တောင်…မေတ္တာနဲ့ ဂရုဏာ က ဟင့်အင်းသူတို့ကြောက်လို့ အနောက်မှာပဲ နေပါရစေလို့ ပြန် ပြောလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ အခုအခြေအနေက အရမ်းရှုပ်ထွေးနေတယ်။ ကျွန်တော့် အမြင်တော့ ရခိုင်တွေဟာ မြေဇာပင်သက်သက် ဖြစ်နေတယ်။ ရိုဂျာဟစ်တွေက ပြည်တွင်းတစ်မျိုးပြည်ပတစ်မျိုးလှည့်ပတ်ပြီး ကလိန်စေ့ငြမ်းဆင် ဒုက္ခပေး နေကြတယ်။ တစ်ခြားပြည်တွင်း အာဏာရူးတွေကလည်း သူတို့တည်မြဲရေးအတွက် လှုံ့ဆော်မှုတွေ လုပ်နေတယ်လို့မြင်တယ်။ နိုင်ငံခြားရောက် ရခိုင်တစ်ချို့ဆိုရင် အဖက်ဖက်ကအကြောင်းတွေ သိနေပြီသားဆိုတော့ ကိုယ်ကမခံခြင်လို့ဝင်ပြောရင်တောင် သူတို့က သိပ်စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး။ ဒီလိုပဲခံနေရမယ်ဆိုတာသိတယ်လေ။ ပြောရရင်တော့ ကုလား/တရုပ် ဘာ ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ကပေါင်းလာတာ ကျွန်တော်ကဗမာဆိုပေမဲ့ အမျိုးထဲမှာ လူမျိုးခြားနဲ့ အိမ်ထောင်ကြတာတွေရှိတယ်။ တစ်ချို့ကောင်းလွန်းလို့ တောင်ခက်နေတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေဆိုလည်း လူမျိုးစုံ ဘာသာစုံရှိတယ် တရုပ်ပန်းသေးတောင် ပါသေး။ တစ်ချို့ကောင်တွေဆို ရင်းနှီးလွန်းအားကြီးလို့ မအေ…တရုပ်/ကုလား ဆဲဆိုပြီးတော့ လည်ပင်းဖက်ပေါင်းလာတာ။ အဲ..အခုကိစ္စက
ဒီ ရိုဂျာဟစ်ဆိုတဲ့ ကောင်တွေ မြန်မာတွေ ရိုးသားတယ် တစ်ချို့ကထစ်ကနဲ့ဆို ဒေါသနဲ့တုန့်ပြန်တတ်တယ် ကမ္ဘာပတ်ပြီး ဘယ်လိုအသနားခံရတယ်ဆိုတာမသိဘူး ကိုသိထားလို့ လှည့်ပတ်ပြီး ဒုက္ခပေးနေတာလို့ပဲမြင်တယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒီကောင်တွေမြန်မာ မကောင်းကြောင်းတွေ အင်တာနက်ပေါ်တင်ထားတာ နှစ်ပေါင်းမနဲဘူးနော် နှစ်၂၀လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ သူက ပထမသိမ်းကျုံးပီး မြန်မာတွေက ကုလားကိုနှိမ်တယ်လုပ်တယ် ထပ်ပြီး ကုလားဆိုတာဘယ်လိုလူတွေကိုခေါ်တာပါဆိုပြီးသိမ်းကြုံးပြီး လူမုန်းများအောင်လုပ်တယ် နောက်ဘာသာရေးဘာပါလာအောင်သွတ်သွင်းတယ်။ အတော်အကြံပက်စက်တဲ့ကောင်တွေ အထူးသဖြင့်ဒီကောင်တွေ ပါကစ္စတန်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မြန်မာတွေ တစ်ချို့ဘ၀အတွက်ရုန်းကန်နေကြတယ် တစ်ချို့ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်။ အင်တာနက်လည်း မသုံးနိုင်ကြဘူး။ ဆိုတော့ ဒီကိစ္စတွေကို မသိခဲ့ကြဘူး။နောက် အဲဒီအချိန်တုန်းက မောင်ဂျာတို့က အကျင့်ပျက်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပေါင်းပြီး ပြည်တွင်းကိုထိုးဖေါက်ဝင်ရောက်နေတာဘယ်သူမှမသိဘူး။ အခုလည်းတစ်ချို့ပြောနေသံကြားတယ် “ဒီဖက်ကိုရောက်မလာကြရင်“ပြီးတာပဲတဲ့။ အမှန်မှန်က သူ့အိမ်ဘေးရောက်နေတာသူမသိလို့ ဖြစ်မှာပါ။ မြန်မာတော်တော်များများက ရေရှည်ကိုမစဉ်းစားဘူး အလွယ်တွေးတယ်။ ဒီကောင်တွေနဲ့ပေါင်းမိရင်ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာ ကောင်းကောင်းနေထိုင်နေတဲ့ ဘာသာခြားတွေပါ အယူမှားသွားရင်ဒုက္ခနော်။ ဥပမာ-ပါကစ္စတန်နဲ့ အာဖဂ္ဂန်ကိုကြည့် နှစ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာရှိပြီ အစွန်းရောက်တွေကြားမှာ အဖတ်ကိုဆယ်လို့ မရတော့ဘူး။ အဲဒီလိုဖြစ်ချင်သလား။ ပါကစ္စတန်မှာကော အာဖဂ္ဂန်မှာပါ မိန်းမသူရဲကောင်းတစ်ချို့ရှိကြပါတယ်။ လေးစားတယ် အတုယူသင့်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုဆိုးရွားတဲ့ ကောင်တွေသာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် ပါကစ္စတန်မှာ အမျိုးသမီးအားလုံးနီးပါးဟာ သူရဲကောင်းတွေဖြစ်လာမှာပါ။ နောက်တစ်ခု နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့ လူတစ်ချို့facebookမှာပြောတာတွေဖတ်ရတယ် stateless တွေ သနားပါတယ် နေရာပေးလိုက်ပါတဲ့။ ပြောတာတော့လွယ်တယ်။ ဒီလောက်တိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားမှာတောင် homeless တွေ ပေါနေတာ အဲဒီလူတွေအရင် ကိုယ့်အိမ်ပေါ်ခေါ်တင် နေရာပေးထားပြီးလို့ အစစအရာရာ အဆင်ပြေတယ်ဆိုမှ မြန်မာပြည်ကကိစ္စလေးတွေ စဉ်းစားပေးကြပါလို့။ ရေးချင်တာတွေတော့ များစွာရှိသေးတယ်။ ကံမကောင်းစွာ အခုတလောဘ၀ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုများ အဆင်မပြေ ပျားပန်းခတ်ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ရပ်လိုက်ပါအုံးမည်။
“ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်ဘာသာမှ `တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး မုန်းတီးပါ။ကိုယ့်ဘာသာကို ကာကွယ်ဖို့ သူတစ်ပါးကိုသတ်ပါ ´လို့ မသင်ကြားပါဘူး။” ဆိုတဲ့ အဆိုအရေးကို ဖတ်လိုက်ရတာနဲ့ စာရေးသူကို လေးစားလာ သမျှ သွားပြီဗျာ…… ကျွန်တော် တော်တော်လေးစိတ်ပျက်သွားမိတယ် ။
အမရေ သေချာလေး စာဖတ်လေ့လာပြီးမှ ရေးစေချင်တယ်ဗျာ…..။ ဘာသာရေးကို ၀င်မပြောချင်ပေမဲ့
ရေးထားတာ တော်တော်လေးကို လွဲ နေပါတယ် ဖြစ်နိုင်ပြင်ပေးစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။။။။
နောက်တစ်ခုက “ဒါငါ့မြေလို့စွဲနေကြရင် ကိုယ်ကိုတိုင်ရဲ့ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ဘယ်နှစ်ဆက် ဒီမြေပေါ်မှာနေခဲ့လဲဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြစေလိုပါတယ်။” လို့ အမရေးထားတယ်နော် အဲလိုသာဆို
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကို ဖက်ဆစ်တွေ ကိုလိုနီတွေ နယ်ချဲ့ တုန်းက ဘာလို့များတွန်းလှန်တိုက်ထုတ်ခဲ့ ကြပါလဲ???????? ငါ့မြေလို့ ဆွဲ ခဲ့လို့သာ အသက်သွေးတွေ မနည်းရင်းပြီး ပြန်ရယူခဲ့ကြတာမဟုတ် ဘူးလားခင်ဗျာ…။ အခုအမရေးတဲ့ စာကိုသာ အသက်ပေးပြီး လွတ်လပ်ရေးယူပေးသွားတဲ့ တိုက်ပွဲဝင် ပေးသွားတဲ့ လူတွေသာမြင်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ တွေးကြည့်စေချင်ပါတယ်…..။
နောက်ပြီး “ဘာသာရေးအတွက်လူကိုသတ်တယ်ဆိုတာ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ပါ။” လို့ရေးထားတာ ဟာလဲ သေချာသာသိရင် အဲလိုပြောပါ့မလား ။ အလ္လာ ရှင်မြတ်ကို မယုံကြည်ရင် သူတို့ရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ချင်းကို ခံရပါမယ် နောက် အဲဒီ မယုံကြည်သူရဲ့ လည်ချောင်းသွေးဖြင် ပူဇော်မူကို ပြုရမယ်တဲ့ နောက်ထပ် အများကြီးရှိသေးပါတယ် ခင်ဗျာ အမစာဖတ်ပါအုန်းနော် လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
တစ်ကယ်လို့ ရွှေပြည်အေးတရား ဟောမယ်ဆိုရင် မောင်ပိုက ကျားသေကို သနားလို့ အသက် ပြန်သွင်းသလို မဖြစ်ဘူးလို့ အာမခံရင်……………………………………
သူတို့က ဘာနဲ့ တူသလဲ ဆို ဇွန်ဘီ ဆိုတဲ့ ဖုတ်ကောင်တွေလိုပါပဲ ရွှေပြည်အေးတရားဟောကြည့်လေ ရမလားလို့ နောက်ကျတော့ တစ်ယောက်တစ်ယောက်နဲ့ အကုန်လုံး ဖုတ်ကောင်တွေလိုဖြစ်ကုန်မယ်
ဒီအထဲမှာ ရေးနေ ဆွေးနွေးနေသူတိုင်း ဟာ ဗဟုသုတ မှာ ဘက်စုံအရာရာ ပြည့်ဝနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ်မှားတာ သူပြင်၊ သူလွဲတာ ကိုယ်ထောက် နဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် တိုးတက်ဖို့ တည်ဆောက်နေရာမှာ သဲတစ်မှုံအဖြစ် ပါဝင်နေကြတာပါ။
ဒီတော့ အစ်မပဒုမ္မာ လွဲနေတယ်ထင်ရင် စေတနာ နဲ့ ပြန်ပြင်ပေးရင် အလွန်ကောင်းပါတယ်။
သူကိုယ်တိုင်လဲ လိုလိုလားလား လက်ခံမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ သူအခု ရေးတဲ့ စာကို လေးစားတာတွေ၊ မလေးစားတာတွေ ပြောနေမဲ့အစား သူပြောချင်တာလေး ကို အသေအချာ ယူလိုက်ပါလား။
တိုင်းပြည်ထဲမှာ မလိုလားအပ် တဲ့ အမုန်းတွေကနေ လက်ရှိ လမ်းပွင့်ပြီး ကောင်းဖို့လမ်းစ လေးတွေတောင် ပျောက်ဖို့ အခြေအနေမို့
အဖက်ဖက် ကနေ သတိတရား နဲ့ ယှဉ်နိုင်ဖို့ သတိပေး ထားတာလေးပါ။
စိတ်ပျက်စရာ ဘာမှ မပါပါဘူး။
ကျွန်တော် Onyx ဖက်က ပြောပေးတယ်လို့ တော့မထင်စေချင်ပါဖူး………..
ရခိုင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များများဟာ ကျွန်တော့်ရှေ့ မှာတင်ဖြစ်သွားတာပါ…..
ဖြစ်တုန်းကတောင် ကျွန်တော် အဲ့ဒီ ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာရှိခဲ့ပါသေးတယ်……
ဖြစ်သမျှ ကိစ္စတွေအားလုံး အဖတ်ဖတ်ကနေတွေးကြည့်ထားပါတယ်……….
သာမန် ဘာသာရေးလူမျိုးရေး ပြသာနာမဟုတ်ပါဖူး…………….
စနစ်တကျ အကွက်ဖော်ထားတဲ့ ပြသာနာပါ………………..
စာရေးသူရေးတဲ့ ထဲမှာ စိတ်ပျက်စရာတွေ တကယ်လည်းပါပါတယ်……………
တကယ်တော့ ဒီအကြောင်းတွေဟာ ဘယ်ဘက်ကရေးရေး အနှောင့်အပါး ကလွတ်ဖို့ မလွယ်ပါဖူး…..
အဲ့ဒီတော့ ရေးကို မရေးသင့်တာပါ……….
ရေးရင်လည်း အားလုံး အဖတ်ဖတ်ကနေ စဉ်းစားပီးမှရေးစေချင်ပါတယ်…………..
အဲ့ဒီတော့ ဘာမှ ဆက်မပြောစေချင်တော့ပါဖူး…………..
စာရေးသူပြောတဲ့အနှစ်ကို ရသင့်တဲ့သူလည်း ရသွားကြပါပီ…..
ဘုရားရှင်တောင်မှ လူသားအားလုံးကို မကယ်နိုင်တာ…………
ကျွန်တော်တို့ ပုထုဇဉ်တွေက လူအားလုံးကို သဘောပေါက်အောင် ပြောဖို့ မလွယ်လောက်ပါဖူး…..
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ဖြင့် မိမိစာမျက်နှာတွင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုများ ပြုလုပ်နေကြသည်ကို ကောင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။ ကိုယ်ချင်းလည်း စာပါသည်။ သို့သော် လက်ရှိအခြေအနေတွင် တစ်ကယ်တမ်း ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများကို ကြုံတွေ့နေရသည်မှာ အွန်လိုင်း မကြည့်နိုင်ရှာသော ပြည်သူများ ဖြစ်နေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်လျှင် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ် အရင်းခံထား၍ နောက်ကွယ်မှ လှုံ့ဆော်မှုများ၊ ကြိုးကိုင်နေမှုများ စသည်တို့ကို သိရှိရပါက တစ်စွန်းတစ်စပင် ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများသို့ အကြောင်းကြားခြင်းမှာလည်း အမျိုးသားရေး ဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် တင်ပြအပ်ပါသည်။